Impendulo Ochungechungeni Lokholo Nesayensi - Rabbi Michael Avraham
Impendulo Ochungechungeni Lokholo Nesayensi
Izimpendulo > Isigaba: Ukholo > Impendulo Ochungechungeni Lokholo Nesayensi
P. Ubuzwe eminyakeni engu-4 edlule
Shalom Harav kumongo wochungechunge lwesayensi nokholo urabi abhala kuloinethi Urabi wasebenzisa Embonweni we-physico-theological
Umbuzo wami uwukuthi: ngokwazi kwami ​​konke kukhona ukungabaza kulobu bufakazi, ngoba inkulumo ngesizathu sokuqala yinkulumo mayelana nesimo esingaphambi kweqiniso futhi lesi simo asizibophezele ekuqinisekiseni ubuqiniso bethu .. qonda ukuthi akusibo ubufakazi
Ngingathanda impendulo ngiyabonga.
Michi Abasebenzi Kuphendulwe eminyakeni engu-4 edlule
Uma ngiwuqonda kahle umbuzo wakho, empeleni ubuza ukuthi siyini isisekelo sokuthatha ukuthi umgomo we-causality oyiqiniso ngeqiniso lethu wawuyiqiniso ngaphambi kokudalwa komhlaba (ngokuba ngamandla awo sibonise ukuthi wadalwa ngabathile. imbangela). Impendulo yami ukuthi umgomo we-causality akufanele ube isizinda ngesikhathi, kodwa mhlawumbe ezinhlotsheni zezinto. Izinto ezaziwa yithi emhlabeni akuzona izimbangela ngokwazo kodwa zadalwa okuthile/umuntu, yingakho-ke kungumgomo we-causality ngazo. Ezinye izinto zingase zingadingi isizathu. Izinto ezisezweni lethu zadalwa endalweni, futhi kuzo isimiso se-causality sisebenza kungakhathaliseki isikhathi. Ngaphandle kwalokho, ngisho nasemhlabeni wethu isimiso sembangela akuwona umphumela wokuqaphelisisa nje kodwa kuwukuqagela okubalulekile. Ngakho-ke asikho isithiyo sokuyisebenzisa nakwezinye izimo / izikhathi futhi.
P. Uphendule eminyakeni engu-4 edlule
Kusukela engxenyeni yesibili yempendulo ngiyaqonda ukuthi i-priori (okungukuthi incike ekwazini) futhi ingokoqobo ngaphambi kokwazi komuntu ..
Okusho ukuthi, konke okuncike ekuqapheliseni komuntu kufakwe ku-causality futhi kodwa konke okukhona ngaphambili akufakiwe ku-causality.
Ngokwalokhu angibuqondi ubufakazi.
Michi Abasebenzi	Uphendule eminyakeni engu-4 edlule
Kunzima kimina ukuxoxa ngezikhawu ezinjalo. Awuzange ungiqonde kahle. Angiphikisi ukuthi umgomo we-causality uncike. Umbango wami wukuthi inhloso, kodwa ithinta izinto esihlangabezane nazo hhayi ezinye izinto. Kodwa mayelana nezinto esibhekana nazo eziyiqiniso ukuthi zisebenza ngisho nangaphambi kokuba umuntu abe khona nangaphambi kokuba umhlaba udalwe (noma kunalokho: mayelana nomzuzu wokudalwa ngokwawo). Engikushilo ukuthi umgomo we-causality awusuki ekubonweni kodwa ngenxa yesizathu sokuqala, kodwa awuphikisani nokuthi uthinta izinto ezibonakalayo (lezo esihlangabezane nazo) hhayi yonke into.
Abangane bakhe Uphendule eminyakeni engu-4 edlule
Ngokusho kukarabi isisekelo sakhe sivela ekubonweni kwangaphandle komqondo we-causality noma into enjalo.
Ngakho ubani owadala? 🙂
Lowo owadala konke
Shonra umhambi Uphendule eminyakeni engu-4 edlule
Uma umhlaba wadalwa kanjalo nje ngaphandle kwembangela, kungani izinkinga ezinjalo zingenzeki nanamuhla?
Eish, ngiphinde ngahamba ngekhibhodi futhi ngathola impendulo.
Sawubona, Shunra Katolovsky